Faa'iidooyinka Helitaanka Waxbarashada Luqadda ee Jarmalka
Iyada oo leh dhaqaalaheeda casriga ah ee xoogan, Jarmalka waa mid ka mid ah wadamada rajada u ah muwaadiniin badan. Waxaan dhihi karnaa waa dal aad u soo jiidasho leh barashada luuqada iyadoo leh fursado waxbarasho oo tayo leh oo ay siiso ardayda.
Markay adduunka guud ahaan Jarmalku ka hadlaan qiyaastii 100 milyan oo qof, Turkiga, iyo sidoo kale ardayda wax ka barta waddankeenna sababta oo ah xiriirka wanaagsan ee Jarmalka ars waa luqad inta badan la doorbido. Waxaan jeclaan lahayn inaan bixinno macluumaad ku saabsan Waxbarashada Luqadda ee Jarmalka maadaama aan u maleyneyno inay faa'iido u tahay ardayda doonaya inay ku helaan waxbarashada Jarmalka ee Jarmalka xaruntooda.
Sidee Loo Bixiyaa Waxbarashada Luqadda Jarmalka?
Waxaan dhihi karnaa go'aanka ay gaareen ardayda doorbida Jarmalka waxbarashada Luqada Jarmalka waa mid aad u sax ah. Jarmalku wuxuu ardayda siiyaa fursado badan oo xagga waxbarashada ah, iyo heerar kala duwan oo waxbarasho iyo barnaamijyo tacliin sare ah, waxay ardayda siineysaa fursad ay ku qalin jabiyaan diblooma laga aqbalo dalkeenna iyo adduunkaba.
Magaalooyinka ay doorbidayaan kuwa doonaya inay luqada ku bartaan Jarmalka waa Munich, Duesseldorf, Frankfurt iyo Berlin. Casharada lagu dhigo iskuulada luqadaha ee Jarmalka waxay ka kooban yihiin ugu yaraan 20 cashar. Guud ahaan, fiisaha dalxiiska ayaa ku filan kuwa doonaya inay ku soo booqdaan dalka tababar la siinayo oo soconaya ilaa 3 bilood. Si kastaba ha noqotee, kuwa heli doona wakhti waxbarasho oo dheeri ah, waxay ku saxnaan laheyd helitaanka fiisada ardayda. Waxaan dhihi karnaa barnaamijyada loogu doorbido barashada luuqada ee Jarmalka waa Jarmal guud, ganacsato Jarmal ah, Diyaarinta imtixaanka TesDaf Jarmal, Jarmal deg deg ah.
Maxay yihiin Faa'iidooyinka helitaanka Waxbarashada Luqadda ee Jarmalka?
Maaddaama Jarmalku yahay luqadda ugu badan ee Yurub lagaga hadlo, ardaydu waxay faa'iido weyn u leeyihiin xagga xirfadda mustaqbalka.
Jarmalku waa wadan dhaqaale leh inkasta oo uu haysto fursado badan xaga waxbarashada.
Xaqiiqda ah in waxbarashada laga bixiyo Jarmalka lagu bixiyo taageerada gobolka ayaa aad u kordhisay tayada waxbarashada.
Turkigu sidoo kale wuxuu ku dhow yahay meel u roon marka laga hadlayo safarka Jarmalka.
Waxaa jira qaabab badan oo loogu talagalay ardayda inay ku ekaadaan miisaaniyadooda.
# Sidee Loo Bixiyaa Waxbarashada Luqadda Jarmalka?
# Maxay yihiin Faa'iidooyinka helitaanka Waxbarashada Luqadda ee Jarmalka?